600 Daawo Sawiro::- Wacdaraha Soodhaweynta Axmed Madoobe Ee Boosaaso, | khaatumo news online
Daawo Sawiro::- Wacdaraha Soodhaweynta Axmed Madoobe Ee Boosaaso,
Jan 16, 2020 - 14 Aragtiyood
Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland Axmed Maxamed Islaam, ayaa maanta oo Khamiis ah gaaray magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Madaxweynaha Jubaland markii uu gaaray magaalada Boosaaso, waxa ku soo dhaweeyay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Puntland oo uu hoggaaminayo madaxweyne Deni.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf, ayaa isna la filayaa in uu maalmaha soo socda gaaro magaalada Boosaaso, halkaasi oo ay kulan xasaasiya ku yeelan doonaan saddexdaasi madaxweyne iyo wakiilo ka socda Beesha Caalamka.
Madaxweynayaasha Puntland, Jubaland iyo Galmudug ayaa wakiillada ka socda Beesha Caalamka, waxay kala xaajoon doonaan qodoba ku saabsan doorashada Soomaaliya ee 2020/2021 iyo khilaafka dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka.
Somalidii intoodii badnayd, waxay isu bedeleen hunguri iyo adaa wax arkee usha iiqabo. Allaah Karim. Bal 2dan duulli ma dawlado kale oo ay u yihiin askar Awrkiraaleyaal ah, ayay ku xuuxinayaan shacabka Somaliyeed. Puntland iyo Jubbaland dadka ku nool waxay noqdeen meyti lagu dul xaabaysto. Waxa cadaatay in reer Puntland yihiin dad la leeyahay, ayna noqoto meesha laga shirqoolo ummadda Somaliyeed. Dalka Somaliya Hargeysa nabar kaga yimi dad aan asal Somaliyeed lahayn baa u taliya; sidoo kale Garowe waxa yaal dulmi iyo boob iyo dhac loogu badheedhay Somali. Dad ka guuray gobolada dhexe iyaguna Caasimadii bay ku habsadeen oo ka wadaan dhibtoodii. Baydhabo iyo kismaayana waxay iska dhigaan waxay qayrkood ku arkeen. Shacabku awoodoodii ayay ka indho la`yihiin, hadday ku mudaharaadaan daqiiqad bay isku dhaafin karaan tuugada du fadhida.
Laangaabyo warkoda loma baahna puntland waa jubaland,jubalandna waa puntland
Xagardiid, caqligiisa ayuu hadlay, ummadda Somaliyeed wuxuu ka dhigay min Hargeisa ilaa Kismanyo, dad aan asal Somali ahayn kkk, iyo dad la leeyahay, 4 qof oo Villa Somalia joogta buu 96% Somalida kale u dullaynaya, Wallaahi Somalidu waa intaa uu ka tegay, xaasid laangaab ah oo ka xun sawirada quruxda leh, ee madaxda Jubbalad yo Puntland, Allow u siyaadi amin
qaran dumis waakaas…qabyaalad qaran ma noqoto
HADDII LAGU DHAADHAAMAYO WAA SAAS OO KALE…DANNI WUXUU URURSADAY WIXII LA NACAY OO DHAN..AXMED MADOOBE MADAXWYNIHII HORE EE JUBALAAND IYO XAAF OO AH MADAXWAYNIHI GALMUDUG..KKKKK
waar wuxu miyaanay ilaahay ka xishhneyn sijaayadihii salaada alle loogu tala galay ayey masaajidada ka soo urursadeen oo ay kabaha la dul marayaan.
Aad ayaan uula yaabaa dadkan aan heleka nahay oo dadnimadoodii kusoo koobay cayda iyo nacaybka ehelkooda. In aad ku faanto oo dhabarka saarto ayey ahayd, magarnaayo meesha aad xasadkan ehelkiina ka keenteen. Xamar waa caasimad Somaaliyed laakiin dad ayey u xirantahay hadii la tagana umadaas ayaad la mid tihiin ama waad ka liidinaysaan. Waxaad xaq uugu lahaydeen maka heshaan? Xamar ayaa malaayiinka doolar oo magacaagu lagu qaato lagu cunaa oo lagu dhisaa, markii adinku aad dalban kari waydeen waxii aad xaqa u lahaydeen kii walaalkiin ahaa oo dhahay waar anigu mayeelayo in lay adeegsado ayaad asagii haysataan ma aragtaan umada kale. Eheloow sidaa isu dhaama waxaan waa laga fiicanyahay
Ayagaba wax iskuma ogola, dhulkoodii waxaa loogala wareegay intay ayaga is xastayeen, sidee cidkale uga sugin in xastin.
Dadkaan ilaah baa sida u gartay.
Ayaanle, waa into aad sheegtay, Somailda inta tashan kari weyday, oo weligoodba loo talinayey, oo hadba askar iyo nabad sugid u noqda maamulka jira ama basaasiin, oo cid dirata waayey oo toodii gabay ayaa hayata dadkii tashaday ee wuxuun qabsanaya, waligaa miyaad maqahay ” Idaha oo qaawan baa Riyaha ku qosla. xaasidnimo uun baa meel lala fadhiyaa
Qoloda Daaroodku sidii qabiil yar oo laangaba bay xintamayan hhhhh aar nagadaaya bahasha xinka iyo xaasidnimada waxaa lagu ogaa qolada Idoor
Aar wadanka utanaasula 30 sana lamaraya maxaa qabyaalad laga faaiiday Somaliya waa 18 gobol 8kamiada waxaa dagan Daaroodka war wadankaba idinka lehe yaanay Muqdisho idiin muuqan wadanku wuu wada dhismaya ceeb maaha hadii marka hore Muqdisho ladhiso ilaa waa caasimadiiye inaga daaya xinkan iyo qabyaalad isu uruursigan wuxuu keenayo malaha
Warsame, malaha xaasidka si uma wada naqaano, ninkii waddankiisa iyo dadkiisa u tashaday ee dedaalaya, ma xaasid baa? Maya kaasi waa mashquul, kan xaasidka ahi waa kan waxba qabsan kari waayey ee meel iska fadhiya, Iidoor iyo xaasid meel isuma soo maraan, dadlkii la dumiyey 90% dib bay u dhiseen, maxaad qabsatay, waadigan Jubbaland iyo Puntland cunaqabatayn iyo dumin ku wada, Somali waa is taqaan, ximaariipnta iyo xaasidka waa la wada yaqaan
Xaarciideed umada somaliyeed ma waxaad u taqaan burcada argagixisada ah ee Qadar lacagta siiso wakiil fahad yasin. Puntland iyo jubbaland dhib kama jiro boowe, NABAR IYO NAXDIN NOO.
Ayaanle,iyo Mukhtaar iyo inta iginla fikir ah xaal qaata.
Dadkaan kale u haysta in la caayo dadkooda iyo dalkooda iyo madaxdooda, waan ka xumahay jahliga idinku jira, waxaan idin oranayaa (fiqi tolkii kama janno tago)
War saaxiib Hargaysa waxay maqasho waxay ujeceshahay Xamar baa qarax ka dhacay taas ma xaasidnino ka wayn baa jirta
hadalkaygu waa xaqiiq maaha waxan iska soo qorayo
Marka reer tolkay waxan uga digaya inaanay bahashu meesha ay reer Hargaysa la gaadhay aanay idinla gaadhin
Dadku waa Somali meelna lakala tagimaaye yaan wakhtiga wax bilaa macna ah lagu lumin runta haloo soo noqdo oo wadanka halawada dhisto
Cid kaliged wax qabsankarta majirto Somali maanta mid maamul leh iyo midaan lahayn waa iskuwada jeeb tahriibna way kuwada jiraan markaa faan yar oo aan macno lahayn yaan wakhtiga lagu lumin wadanku hal dowlad buu ubaahan yahay ninkaan intaan fahmayne sida xayawaanka duurka haku noolaado